6 egwuregwu vidio megide mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe nkiri, akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ banyere mgbanwe ihu igwe, ekele nke anyị ga-amụta ma ghọta ihe ọ mejupụtara, yana ihe kpatara ya. Ma na mgbakwunye, anyị nwekwara egwuregwu vidio nke ahụ ga - enyere anyị aka ịnwe ezigbo oge mgbe anyị na - amalite njem dị egwu iji chekwaa ụwa.
Ga-achọ ịmata ndị ha bụ?
2 Nsogbu Ihu Igwe
3 Mee ya Green
4 Mwakpo Gas
5 Onye Capman
Nke a bụ egwuregwu efu nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke Basque Surfer Kepa Acero, wee bido mgbe ụgbọ mmiri ya kụrụ iceberg. I ghaghi inyere ya aka dozie mgbagwoju anya yabụ ịnwere ike ịghaghachi ụgbọ mmiri gị mgbe ị chọpụtara etu North Pole na-ata ahụhụ ahụhụ nke okpomoku ụwa.
Ọ dị maka nyiwe ekwentị niile.
Nsogbu Ihu Igwe
Egwuregwu ọzọ na-enweghị n'efu, nke British BBC mepụtara, nke ị nwere ike ịghọ onye akụkọ ifo nke mba Europe. Ozi gị ga-abụ chepụta ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-elekọta ndị ọzọ mgbe ị na-ewu ewu. Na mgbakwunye, ị ga-eme ka mba ndị ọzọ kwenye igbochi nsị carbon dioxide ha. You nwere ike nweta ya?
Mee ya Green
Egwuregwu a n'efu nke National Geographic mepụtara na-akpọ gị òkù hazie obodo ndu, gburugburu obibi, ijikwa akụrụngwa ka a ghara imetọ ụwa. Na mgbakwunye, ị ga-emepụta ọrụ ndụ akwụkwọ ndụ na ịhazi obodo.
Egwuregwu vidio n'efu na-agbanwe mgbanwe ihu igwe site na NASA, nke ị ga-emerịrị belata anwuru ahihia gas iji zere ọdachi.
Styledị "Comecocos" Emepụtara ya site na Carbon Market Watch na Pixel Imact n'oge 2015. must ga- na-eripịa ikuku gas na ihuenyo gị na kọmputa ma ọ bụ mobile. Ọ bụkwa n'efu.
Ejiri Tekit mepụta egwuregwu vidiyo a n'efu. Ga-eme gbanwee usoro e ji emepụta ihe, otú e si eme omenala, tinyekwara ihe ndị ọzọ na-emetọ ụwa.
You ma egwuregwu vidio ndị ọzọ megide mgbanwe ihu igwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » 6 egwuregwu vidio megide mgbanwe ihu igwe